प्रचण्डको पहलमा चौधरीले पाए सांसद लोगो ! तर हत्कडीमा किन पाएनन उन्मुक्ति ? – www.agnijwala.com
प्रचण्डको पहलमा चौधरीले पाए सांसद लोगो ! तर हत्कडीमा किन पाएनन उन्मुक्ति ?
काठमाडौं ।नेपालको राजनीतिमा चर्चाको शिखरमा रहेका प्रचण्ड फेरि चर्चामा आएका छन। अप्रत्यासितरुपमा कैलाली हत्याकाण्डका मुख्य नाइके मानिने चौधरीलाई किन सपथ गराउन तयार भए प्रधानमन्त्री ओली ?भन्दा यसको मुल कारण हो अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र राजपा अध्यक्ष राजेन्द्र महतोबीचको एक घण्टा छलफल । ११ पुसमा दाहाल र महतोबीच एक घण्टा छलफल भएको थियो । छलफलपछि चौधरीलाई रिहा गरेर सपथ गराउने निस्कर्ष निस्केको थियो । प्रचण्डले दुई नेताबीचको सहमतिलाई लिएर बालुवाटार पुगे तर प्रधानमन्त्री ओलीले अदालतमा मुद्दा बिचाराधिन भएका बेला उनको हातबाट हत्कडी खुलाउन नसकिने बताए ।
‘मुद्दा फिर्ताको तयारी गर्दै गरौला तर अहिले सपथ गराऔं,’ ओली र दाहालबीचको सहमति पछि प्रधानमन्त्री निवासबाट प्रचण्डले महतोलाई टेलिफोन गरेका थिए । सुरुमा तयार नभएका महतोपछि तयार भए । प्रचण्डको पहलले चौधरीलाई सांसदको लोगो र प्रमाण दिलाए तर कारगारबाट उनी मुक्त भने भएनन।